Afganisthana: Fanamelohana ho faty amin’ny fizarana bilaogin-dahatsoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2019 3:59 GMT
Mpitati-baovao ho an'ny Jahan-e Naw (Tontolo Vaovao) izay gazety mpivoaka isak'herinandro izy ary mpianatra ho mpanao gazety ao amin'ny Oniversiten'i Balkh.
Araka ny filazan'ny Afghan Penlog sy ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena, nosamborin'ny manampahefana tamin'ny 27 Oktobra 2007 i Parwez Kambakhsh noho ny fangalana sy ny famoahana lahatsoratra ho an'ireo namana izay hitany tao amin'ny tranonkalam-bilaogy Iraniana. Niresaka momba ny zon'ny vehivavy, ny Coran ary ny mpaminany Mohammed izany. Nanameloka azy ho faty noho ny fanevatevana ny fitsarana iray tany Avaratr'i Afganisthana ao Mazar-e Sharif.
Nilaza ny mpanara-maso ny fampitam-baovao manerantany Reporters Sans Frontières fa ” natao kimaimaika ny fitsarana ary tsy nisy fijerena ny lalàna na ny fanehoan-kevitra malalaka, izay arovan'ny lalampanorenana.”
Nilaza ny Tondro momba ny Sivana hoe :
Tena mpandala ny nentin-drazana tanteraka ireo mpitondra fivavahana Afghana, ny ankamaroany dia tsy mbola nampiasa solosaina na Aterineto mihitsy hatrizay, ary nihevitra fa i Kambakhsh mihitsy no nanoratra ity lahatsoratra ity ary nahita azy ho meloka amin'ny fanevatevana noho izany. Satria tsy misy moa ny fanasaziana mazava amin'ny fangalana lahatsoratra “tsy Islamika” avy amin'ny aterineto dia nanontany ny hevitr'ireo mpitondra fivavahana ny fitsarana ambony. Nitaky ny fanamelohana ho faty noho izany ireo mpitondra fivavahana mpandala ny nentin-drazana, izay tsy nanadihady momba ilay raharaha akory.
Mety ho lasibatra ny rahalahin'ilay mpanao gazety
Araka ny filazan'ny CNN, maro ireo mihevitra fa voasambotra i Kambakhsh noho ny lahatsoratra izay nosoratan'ny rahalahiny nanakiana ny manampahefana avy any amin'ny faritany. Ilay rahalahiny, Sayed Yaqub Ibrahimi dia nanoratra tantara marobe izay manazava amin'ny antsipiriany ny zon'olombelona.
Namoaka fanambarana ny Afghan PenLog izay niampanga ireo manampahefana Afghana tamin'ny fiezahany handositra ity olana ity: “… Namoaka taratasy ny Minisiteran’ ny fampahalalam-baovao sy ny Kolontsaina Afghana izay nilaza fa tsy mpanao gazety i Parwiz Kambakh ary tsy misy ifandraisany amin'ny fampahalalam-baovao ny raharaha mahakasika azy . “Manahy mafy ny Afghan Penlog, ary mitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro an'i Parwiz Kambakhsh.